बोराका झोला व्यापार- न स्वदेशमा... :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार २३
प्रकृति मैनालीको कम्पनीले बनाएका बोराका पर्सहरू देखाउँदै विदेशीहरू। तस्बिर सौजन्यः शक्ति मिलनको फेसबुक
अहिलेको जमानामा बोराको झोला बोक्नु परे तपाईं कस्तो महशुस गर्नुहुन्छ?
बोरा भन्नासाथ नाक खुम्च्याउने वा हाँसोमा उडाउनेहरूलाई प्रकृति मैनालीको कामले 'सर्प्राइज' दिन्छ। उनी बोराको झोला बनाउँछिन्, आकर्षक र फेन्सी डिजाइनमा।
उनले बनाएका झोला हातमा परेपछि मान्छे अचम्म मान्दै भन्छन्– 'बोराको झोला, यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ है! क्या कूल।'
ग्राहकबाट आउने यस्तै प्रतिक्रियाले संकटमा पनि प्रकृतिको कम्पनी 'शक्ति मिलन' चलायमान छ। विदेशमा समेत सामान निर्यात गर्दै आएकी प्रकृति अहिलेको अवस्थामा पनि फुर्सदमा छैनन्। कतिपय देशबाट अग्रिम भुक्तानीसहित अर्डर आइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
'कोरोना महामारी कहिले सकिन्छ थाहा छैन। मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक कस्तो योजना बनाउने दुबिधा छ। समस्यालाई आत्मसाथ गरेर समाधान खोज्नतिर लाग्नु अहिलेको हाम्रो रणनीति हो,' व्यापार स्थिर हुनुको कारण खुलाउँदै प्रकृति भन्छिन्, 'ग्राहकले आवश्यक सहयोग गरेका छन्। सानातिना योजनामा पनि काम गरिरहेका छौं।'
कोरोना महामारीबीच अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसाय धरापमा छन्। लत्ताकपडा वा झोलासम्बन्धी व्यवसाय अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु हुन्। तत्कालै आवश्यक नपर्ने उत्पादनले बजारमा स्थान पाइरहँदा प्रकृति दंग छिन्।
'अझै दुई-चार महिना यस्तै रह्यो भने पनि हामी पछि पर्दैनौं, उठ्न सक्छौं। हाम्रो बजार अझै बलियो छ,' उनी भन्छिन्, 'व्यवसायमा तलमाथि त भइरहन्छ। तर बिस्तारै कच्चा पदार्थ नपाइने, उत्पादित वस्तु निर्यातमा समस्या आयो भने भन्न सकिन्न।'
हालको अवस्थामा कम्पनीलाई त्यति समस्या नपरे पनि यहाँबाट सिप सिकेर गएका महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय अप्ठ्यारोमा छन्। शक्ति मिलनमा काम गर्दागर्दै आफैं व्यवसाय सञ्चालन गरेका महिलालाई दिगो बनाउन कम्पनीले अल्पकालीन योजना अघि सारेको छ।
योजनाअनुसार कामदार महिलालाई लत्ताकपडा तथा खाद्यान्न प्याकेज बनाउन लगाइएको छ। ती सामान काठमाडौं आसपासका सुत्केरी महिलालाई दिएर दोहोरो सहयोग गरेको प्रकृतिले बताइन्।
'हाम्रो सर्कलमा रहेका महिलाबाट लुगा, कपडा किनेर प्याकेज बनाएर अति विपन्न सुत्केरी महिलासम्म पुर्‍याएका छौं,' प्रकृतिले भनिन्, 'यता लुगा सिउने महिलालाई आर्थिक सहयोग भयो, उता सुत्केरी महिला र शिशुलाई पनि राहत।'
लकडाउन सुरू हुनासाथ साता-दस दिन कम्पनी बन्द गर्ने योजना दुई महिना लम्बियो। पहिलेको रफ्तारमा काम भएन। कतिञ्जेल यसरी बस्ने? यही सोचेर एक महिनायता उत्पादन चालू राखेको प्रकृतिले बताइन्।
प्रकृतिको कम्पनीले बनाएका बोराका विभिन्न डिजाइनका झोला। तस्बिर सौजन्यः शक्ति मिलनको फेसबुक
काठमाडौंमै भएका महिला काममा गइरहेका छन्। तर जो आउन पाएका छैनन् उनीहरूलाई समस्या छ। चार महिना काममा जान नपाउँदा खाइपाइ आएको रोजगारी नै डुब्ने चिन्ता उनीहरूमा भएको प्रकृति बताउँछिन्।
'फर्केर काठमाडौं आउँदा मेरो जागिर हुन्छ कि हुँदैन, नभए के गरेर बाँच्ने, केटाकेटी कसरी पढाउने जस्ता चिन्ताले सताएको रहेछ,' प्रकृति भन्छिन्, 'यो समस्या बुझेर उहाँहरूसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं। परामर्श दिइरहेका छौं।'
शक्ति मिलनले बोराबाट सानो पर्स, हाते र ठूला झोला बनाउँछ। यी उत्पादन जर्मनी, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता देश पुग्छन्। मुख्यगरी युरोपेली बजारमा कम्पनीको केन्द्रित छ।
उनका अनुसार नेपालीको तुलनामा विदेशीहरू पुनःप्रयोगका सामान रूचाउँछन्। नेपालमा १ हजार ५ सय रूपैयाँ पर्ने झोला युरोपेली बजारमा करिब ५० यूरोमा बिक्छ।
जर्मनीमा कम्पनीको आफ्नै अनलाइन स्टोर छ। त्यस्तै अमेजन लगायत ठूला अनलाइन बजारमा पनि उत्पादन जान थालिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
'अघिल्लो वर्ष हामीले करिब ३ हजार झोला उत्पादन गरेका थियौं, धेरैजसो विदेश निर्यात भए,' अहिले पनि विभिन्न देशमा रहेका शाखामा 'स्टक' हुँदासम्म आत्तिनपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछिन्।
'कति महिनासम्म उहाँहरूको रोजगार सुरक्षित छ, यसै त भन्न सकिन्न। तर आजका दिनसम्म चिन्ता छैन।'
समस्या बेलामा पनि व्यवसाय स्थिर रहनुमा कम्पनीको उद्देश्य र कामको प्रकृतिले टेवा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।
एकल, सीमान्तकृत, घरेलु कामदार भएर बाहिरी जीवनमा निस्केका, घरेलु र यौनजन्य हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेर फर्किएका महिला नै बोराका आकर्षक झोलाका सर्जक हुन्। सामाजिक पुनःस्थापना खोजिरहेका २२ महिलालाई शक्ति मिलनले अवसर दिएको छ। रोजीरोटीको माध्यम बनेर सामाजिक जीवनमा फर्काएको छ।
'तपाईंले एउटा झोला किन्दा एक जना महिलाले रोजगार पाउँछिन्। उनको आर्थिक हैसियत बलियो बन्छ। उपचार पाउँछन्। बच्चाले राम्रो स्कुल पढ्न र पेटभरी खान पाउँछन्। यस्तोमा एउटा झोला किन नकिन्ने,' उनी थप्छिन्।
कम्पनीको काम र योजनाबारे ग्राहक र क्रेता जानकार रहेको प्रकृतिले बताइन्। क्रेताको समझदारी र विश्वास नै कारोबारको माध्यम भएको उनको बुझाइ छ।
भन्छिन्, 'यस्तो व्यवसाय डुब्न दिनुहुन्न भन्ने क्रेताले बुझिसकेका छन्। यो सहयोगले हामीलाई अघि बढ्न र बजारमा टिकिरहन आड दिएको हो।'
सामान्य र फोहोरको थुप्रोमा फालिएका बोराबाट कसरी बन्छ त आकर्षक झोला?
गुणस्तर जाँच गरेर बोरा काटकुट पारी चेन र भित्री हालेर सिलाइन्छ।
यसरी उत्पादित झोला देखेर बोरा उत्पादक नै दंग परेको घटना प्रकृति सुनाउँछिन्। उनी एक उद्यमी सम्मेलन पुगेकी थिइन्– आफूले उत्पादन गरेको झोला बोकेर। समारोहमा एक जना व्यक्ति भेटिए, संयोगले उनी त्यही बोरा (चामलको) उत्पादन कम्पनीका मालिक रहेछन्।
'नाम त याद भएन तर उहाँले झोलाको खुबै तारिफ गर्नुभयो। हामीले प्याकिङमा मात्र काम लाग्ने हिसाबले बनायौं भनेको, यति राम्रो झोला बन्ने रहेछु भन्नुभयो,' प्रकृतिले सुनाइन्।
फालिएका बोराका यति राम्रा झोला, सामग्री बनाएर व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने कसरी लाग्यो?
आमालाई सधैं घरको नाइके देखेर आफूमा हिम्मत बढेको प्रकृति बताउँछिन्। आमाले गर्ने सानोतिनो व्यापार होस् या उनको नेतृत्व क्षमता, प्रकृतिलाई सिकाइ बने।
'हामी तीन बहिनी मात्रै हौं, ममीले धेरै कुरा सुन्नुपर्‍यो। तर उहाँ आँटिलो हुनुहुन्थ्यो, केहीमा ध्यान नदिई काममा लागिरहनुभयो। आमाको गुण ममा छ कि जस्तो लाग्छ,' उनी फुरूंग हुन्छिन्।
प्रकृतिको कम्पनीले बनाएका बोराका पर्सहरू देखाउँदै विदेशीहरू। तस्बिर सौजन्यः शक्ति मिलनको फेसबुक
सन् २०१४ मा शक्ति मिलन कम्पनी दर्ता गरेर उनले ३० हजार लगानीमा एक जना कर्मचारीबाट बोराको झोला बनाउन सुरू गरिन्।
केही नयाँ गर्ने उद्देश्य पूरा हुने, महिलालाई अवसर दिने चाहना, पर्यावरण संरक्षणमा टेवा, सबै एकैसाथ हुने भएपछि फालिएका बोराले पुनः जीवन पाएका उनले बताइन्। बजारमा पठाएको झोलाको नमूना राम्रो मानियो। देख्नेहरूले भन्न थाले –वाह क्या कुल!
६ वर्ष व्यापार व्यवस्थापनमा लागेकी प्रकृतिका अनुसार यतिबेला व्यापारको मोडल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। कतिपय अनलाइन व्यवसाय यतिबेला फस्टाएको बताउँदै उनी थप्छिन्, धेरै अनलाइन व्यवसायले आफूलाई स्थापित गरेका छन्। गैर-अनलाइन पनि यसैमा लागेका छन्। यो नै आजको आवश्यकता रहेछ।'
आगामी दिनमा कोरोना महामारीले कस्तो रूप धारण गर्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ। व्यापारी-व्यवसायीले पनि कस्तो योजना तर्जुमा गर्दा सजिलो होला भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन्।
प्रकृति भन्छिन्, 'समस्या अनुमान नहुँदा योजना बनाउनेबारे सोच्न सकेका छैनौं। थोरै समयका लागि ससाना कामले व्यवसाय धानिरहेका छौं।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २३, २०७७, १४:३९:००
नेकपामा भद्रगोल- मंसिरको कुरा छाडौं, चैतमा महाधिवशेन हुनेमा पनि आशंका